Nzira Dzokudzivirira Mapoka eWashington DC
Nyika dzakabatana Washington, DC
Nzira Yokuongorora Washington DC uye Dzivisa Makanhu
Mufananidzo © Fuse
Sezvo Washington DC inogamuchira mamiriyoni evashanyi gore rega rega, zvitsva zvinotaridzika kune vanotaridzika zvinenge zvichiita kuti zvive nyore nguva dzose. Iwe unogona kudzivisa mapoka evanhu achitarisa guta uye kuchengetedza nzvimbo yako pachako kana iwe uchiziva kuti sei. Heano mamwe mazano ekuita kuti kuona kwako kuve kunakidza uye kuderedza marwadzo ekumira mumitsara yakareba.
I National Mall uye Downtown nzvimbo ine zvivako zvemasero akawanda zviri pedyo zvikuru. Paunenge uchironga nzira yako, iwe ungasafanira kuenda kune imwe nzvimbo yepedyo yemasitro, sezvo iwe ungakwanisa kufamba nyore nyore kune imwe nzvimbo kubva kune imwe nzvimbo yakatarisana. Ini pachedu, ndinodzivisa kuchinja chitima kana zvichibvira. Tora mapeji kana kushandisa GPS kuti uende netsoka. Iwe uchafara kuona zvimwe zvemasayiti, tora maitiro uye udzivise mapoka eMetro.
Kana uri kuenda kune chimwe chiitiko chakanyanyisa uye kutora Metro, iva nechokwadi chekuuya uye kubva kubva pane zviteshi zvisati zviri pedyo nekuenda kwako. Nzvimbo yepedyo yepamusoro ichagara yakanyanyisa uye kana uchifamba zvishoma iwe unogona kutiza mitsetse yakareba. Imwe nyanzvi, iva nechokwadi chekuisa mari yakakwana pane yako SmarTrip kare kare. Vazhinji vashanyi havagadziri mberi uye mitsara yakareba yakaumbwa nemichina yekufambisa mberi uye mushure mechiitiko chikuru. Verenga zvakawanda nezvekushandisa Washington's Metrorail.
Washington DC iri guta rakanyanyisa uye rinowanzoita nyore nyore kufamba munzira yako kubva panzvimbo yakazara. Kana iwe uri pane chimwe chiitiko kana kushanyira kunakidza kunongova kwakanyanyisa zvikuru, famba kure uye uronga kudzoka pane imwe nguva. Kune nzvimbo dzakawanda dzekunakidza dzekushanyira muguta rose uye unogona kuwana nyore nzvimbo yeguta risina kukwana.
Shanyira Zvishoma Zvizivikanwe Zvitsva
Frederick Douglas National Historic Site
Kana uchida kudzivisa mapoka evanhu vose, kubva kure kubva kuNational Mall uye uone zvimwe zvezvinhu zvinozivikanwa zvishoma mumuguta. Kune zvakawanda zvinofadza mumamisimusi, zvivako , mapaki uye nzvimbo dzakapoteredza muWashington DC. Enda kumamoriyumu emangwana edzimba yepamusoro peguta kana kupedza nguva imwe pane dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana mumusamusi muDupont Circle . Tora kufamba paAmbassy Row uye ushamise pane zvekuvakwa. Shandisa imwe nguva mupaki kana kutora maonero eRwizi rwePotomac.
# 3. Dzivisa Peak Times
Nguva ndeyezvose. Kuti udzivise mapoka eWashington DC, kune dzimwe nguva dzepamusoro dzaunofanira kuziva. Nguva dzakaoma zvikuru dzegore ndezvenyika yeCherry Blossom Festival (mwedzi waMarch-Kutangira April), Chirangaridzo Chevhiki yeChirangaridzo uye 4 th July. Imwe nguva yakabatikana yevhiki yekuonga, yevhiki yeKrisimusi uye yevhiki yeIsita . Cherechedza kuti Smithsonian yakazaruka zuva nezuva regore kunze kweKrisimasi. Saka, Kutenda, Zuva reKrisimusi uye Zuva Rutsva Idzva iko chaizvoizvo mazuva akanaka ekushanyira musamuziyamu apo vanhu vazhinji vari kushingaira kupemberera nemhuri dzavo. Mugore rose, vhiki dzevhiki nevhiki zvakabatikana uye vhiki dzevhiki dzinoshandiswa pakuona nzvimbo. Mhomho dzichareruka mangwanani nekupera kwezuva. Zvakawanda zvezviyeuchidzo zvinovhurwa maawa 24, saka manheru inguva yakanaka yekushanyira. January naFebruary vanowanzotora mwedzi yakanyarara nekuda kwemamiriro ekunze asingatarisiri. August inonyarara zvakare - Congress inotora nguva yekuzorora uye vazhinji vekune zororo kuti vatize mhepo inopisa uye inonaya. Svondo kusvika kuNovember mwedzi mikuru yekuongorora guta racho. Kuti uwane mamwe mashoko, ona Washington DC Nenguva . Zvimwe zvinokanganisa zvinoda kutengesa matikiti Ona mutungamiri kuWashington DC Zvitsva zvinoda Kuti Purogiramu Yekugadzirira isarwe.
Mamwe mazano ekucherechedza
Top Top 10 Things to Do in Washington DC Capital Region
Best Tours Tours in Washington DC
One Day Tour of Washington DC
Kuronga hove Washington DC? Zvaunoda Kuziva
15 Nzvimbo dzakanakisisa dzekuenda nevana kuWashington DC
Arlington Festival of the Arts 2018
DC High Heel Drag Queen Race 2017
Top Top Ten Things to Do at National Harbor, Maryland
Top 10 Yakakwikwidzana Yepamende ku Washington, DC
Zuva revakafa 2016 muWashington, DC
Giant Pandas paZimbabwe National Zoo Washington DC
8 Neruzidzo Dzinotora Magetsi Okufamba Zvishoma
201 Nzvimbo Iyo Vana Vana Vanofambira muUnited States
Outdoor Recreation and Activities in Boise Idaho
5 Kansas RV Mapoka Unofanira Kufona
County Antrim - Zvakakodzera Kushanyirwa Here?
Nzira Yokufamba Nayo Memo muBali, Indonesia
Mawaniro Aungaita A Passport muU.SA
Kudzivirirwa & Inishuwarenzi
11 Inofanirwa-Ive Nekusununguka Famba Zvirongwa zveRwendo Rwuno Rutevera
Nzvimbo Dzakakurumbira Mapoka uye Mapoka Anofadza muJapan
Zvinhu Zvokuita muAtlanta: City's Top Tourist Attractions
Airport Food Options Options Inowedzera Kuedza Kupfuura Cinnabon
Chirongwa cheFlorida Keys
Kwatinofanira Kuita SaKana muToronto
Zvinhu Zvisingabhadhari Zvokuita muMemphis
© 2021 sn.traasgpu.com